Milatariga Kenya oo Xabsiga Dhigay xubin sare oo ka tirsan Al-shabaab – Radio Daljir
Juunyo 21, 2015 12:16 b 0
Axad, Juun 21, 2015 (Daljir) â€”Taliyaha Guud ee Boliska Kenya, Joseph Boientt ayaa sheegay inay nin lala xiriirinayo Alshabaabkii dagaalamay ku qabteen Degmadda Fooy.
Isagoo Suxufiyiinta kula hadlay magaalladda Mombasa ayaa waxa uu tilmaamay in la qabtay Eedeysanaha xilli uu doonayey inuu iska soo dhayo dhaawac rasaaseed, waa sida uu hadalka u yiri.
Waxa uu intaasi ku daray in Eedeysanaha uu sheegay inay dhaawacyadda rasaasta ku soo dheceen xilli uu ku sugnaa dalka Koonfurta Afrika.
Taliyaha Guud ee Boliska Kenya, waxa kaloo uu sheegay inay heleen Muuqaal Video oo ay Dagaalamayaasha Alshabaab ka duubeen iska horimaadkii ay Axaddii hore la galeen Ciiddanka Kenya, wuxuuna intaasi ku daray inayÂ ka heli doonaan xogta ku aadan sawiradda Dagaalamayaashii ka qeyb galay iska horimaadkaasi, waa sida uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale dowladda Kenya ayaa shalay Shaacisay Sawirrada 38-qof oo ka tirsan Xarakada Al-shabaab ee Somalia oo ku sugan gudaha dalka Kenya, iyadoo ay sheegtay xukuumadda Nairobi inay baadi-goob ku haysay Xubnahan.
Waxaa sawiradda la baahiyey ka mid ahaa Muwaadin u dhashay dalka Jarmalka oo lagu magacaabo Ahmed Muller, kaasi oo ay Dowladda Kenya madaxiisa dul-dhigtay abaalmarin dhan 100,000 oo Dollar.